Vaovao - mahery ny fangatahana fiara elektrika, hitombo 20% ny famokarana Chevrolet Bolt EV
Mahery ny fangatahana fiara elektrika, hitombo 20% ny famokarana Chevrolet Bolt EV
Amin'ny 9 Jolay, GM dia hampiakatra ny famokarana fiara mpamokatra herinaratra 20% an'i Chevrolet Bolt hahatratra ny avo kokoa noho ny tinady tsena antenaina. Nilaza ny GM fa any Etazonia, Kanada ary Korea atsimo, ny varotra maneran-tany an'ny Bolt EV tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2018 dia nitombo 40% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Ny CEO jeneraly GM Mary Barra dia nilaza tamin'ny kabariny tamin'ny volana martsa fa mety hitombo hatrany ny famokarana Bolt EV. Ny Chevrolet Bolt EV dia novokarina tao amin'ny orinasa Orion Orion any Michigan, ary ny famarotana azy dia tsy ampy. Mary Barra dia nilaza tamin'ny valandresaka iray tany Houston, "Miorina amin'ny fitomboan'ny fangatahana manerantany momba ny Chevrolet Bolt EV, dia nanambara izahay fa hampitombo ny famokarana Bolt EV amin'ny faran'ity taona ity."
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona, ny Bolt EV dia nivarotra singa 7 858 tany Etazonia (ny varotra dia nanambara fotsiny ny varotra tamin'ny tapany voalohany sy faharoa), ary nitombo 3,5% ny varotra fiara tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2017. Tokony homarihina fa Mpifaninana lehibe amin'ity dingana ity dia ny Nissan Leaf. Raha ny tatitra nataon'ny Nissan dia 6.659 ny haben'ny varotra an'ny fiaran'ny herinaratra LEAF any Etazonia.
Kurt McNeil, filoha lefitry ny orinasam-barotra GM dia nilaza tamin'ny fanambarana iray fa "Ny vokatra fanampiny dia ampy hanarahana ny fitomboan'ny varotra Bolt EV manerantany. Ny fanitarana ny tahiry ao amin'ny tsenan'i Etazonia dia hahatonga ny fahitanay ny fandefasan-kaody aotra eran'izao tontolo izao Dingana iray akaiky kokoa. ”
Ankoatry ny varotra mivantana sy ny fanofana ho an'ny mpanjifa, ny Chevrolet Bolt EV koa dia navadika ho autopilot Cruise Automation. Marihina fa nahazo ny Cruise Automation tamin'ny taona 2016 ny GM.